အနားမှာဘယ်သူမှမရှိတဲ့အချိန် ကိုယ်တို့ဒါလေးတွေလုပ်တတ်ကြတယ်… – Trend.com.mm
Posted on October 4, 2018 by Noel
လူကြားထဲမှာကိုယ်တွေပြုလုပ်တတ်တဲ့အရာနဲ့ ဘယ်သူမှမရှိတဲ့အချိန် ကိုယ်တွေလုပ်တတ်ကြတဲ့အရာတွေဟာ နည်းနည်းတော့ခြားနားတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဒါက သင်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့လူတိုင်း ဒီအချက်တွေထဲက တစ်ချက်ချက်ကို အနားမှာလူမရှိတဲ့အခါ လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေက အကျင့်ဆိုးလေးတွေလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။လူကြားထဲမှာချပြလို့မရတဲ့အရာတွေလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတွေက လူအများစုလုပ်တတ်ကြတာဖြစ်လို့ စိတ်စနိုးစနောင့်မဖြစ်ပါနဲ့။အပျင်းပြေပေါ့ ။ကဲ ဒါဖြင့် ကိုယ့်အနားမှာလူတစ်ယောက်မှမရှိတဲ့အခါ
ဒါကြီးကတော့ လူကြားထဲမှာဘယ်သူမှမလုပ်ကြပါဘူး။အနားမှာဘယ်သူမှမရှိဘူး၊ကိုယ့်ကိုဘယ်သူမှကြည့်မနေဘူးဆိုမှ လုပ်လေ့ရှိကြတာပါ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်!
2*တစ်ယောက်ယောက်ကိုယ့်ဖုန်း၊လက်ပ်တော့ငှားတဲ့အခါ Google ၊ Facebook History တွေဖျက်မယ်
လူတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်လျှို့ဝှက်ချက်ဆိုတာရှိတာကြောင့် ဒါတွေကို တစ်ခြားသူတွေမြင်မှာစိုးပါတယ်။ဒါကြောင့် တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့်ဖုန်း၊လက်ပ်တော့ကိုယူကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီ history List
တွေကိုဖျက်ထားလေ့ရှိပြီး အဲ့ဒီလိုဖျက်ထားတယ်ဆိုတာကိုလည်း တစ်ခြားသူတွေမသိစေချင်ကြပါဘူး။ဘာမှမရှာဘူး၊ဘာမှမကြည့်ဘူးပေါ့။
3*ကိုယ့်ကို FB မှာလာ add ရင် အဲ့လူရဲ့ Wall ထဲအရင်ဝင်ကြည့်လေ့ရှိတယ်
အရင်ကတော့ ဒီလိုမျိုးတွေသိပ်ပြီးလုပ်လေ့မရှိကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ လူပေါင်းစုံရှိနေတဲ့အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ကိုယ့်ကိုလာ add တဲ့သူက ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ၊ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်လာပါပြီ။ဒါကြောင့် ကိုယ်တို့တွေက တစ်ခြားသူတွေ လာ add တဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ Wall ထဲကို အရင်ဝင်ကြည့်လေ့ရှိကြပါတယ်။ယူတို့ရော?
ကိုယ့်အနားမှာဘယ်သူမှမရှိတဲ့အချိန် အီးပေါက်ချင်တာနဲ့တိုးရင် ပေါက်ချလေ့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ လေ့လာချက်တွေအရတော့ ဓာတ်လှေကားထဲမှာတစ်ယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန် အီးပေါက်ကြတဲ့သူတွေများပါတယ်တဲ့။
တစ်ခါတစ်လေ ပစ္စည်းသေးသေးလေးတွေ တွေ့တယ်။ခုံတွေပေါ်သွားမတင်ချင်တဲ့အခါ ကိုယ်တို့ဟာ ဘယ်သူမှမတွေ့ဘူးဆိုပြီး ကော်ဇော်အောက်ကို ပစ်ထည့်ထားလေ့ရှိပါတယ်။
ကော်ဇော်အောက်တင်မကပါဘူး။အမှိုက်တုိ့၊မလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတို့ တွေ့တဲ့အခါ အလွယ်တကူမမြင်ရတဲ့ရေခဲသေတ္တာအောက်၊ခုံအောက်တွေထဲပစ်ထည့်တတ်တဲ့အကျင့်လေးတွေ ရှိကြပါတယ်။
6*အကျီက လူကြားထဲဆက်ဝတ်လို့ရသေးလား နမ်းကြည့်တတ်ကြတယ်
ကိုယ်က မလျှော်ရသေးတဲ့အကျီကြီးဝတ်လာမိတယ်။လူကြားထဲမှာတော့ အကျီက ၀တ်ထားလို့အဆင်ပြေပါ့မလား နမ်းမကြည့်ပဲ တစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်ဆိုစိတ်ချလက်ချအပြင်သွားနိုင်အောင် ကိုယ့်အကျီကိုနမ်းကြည့်လေရှိတယ်။
မညာပါနဲ့၊ရေချိုးရင်း ရှူးရှူးပေါက်ချတတ်တယ်မဟုတ်လား။ရေချိုးခန်းထဲမ၀င်ခင် သန့်စင်ခန်းဝင်လို့ရပေမဲ့လည်း ရေချိုးရင်း ပေါက်ချတတ်တာ လူတော်တော်များများပါပဲ။
ကိုယ့်အနားမှာဘယ်သူမှမရှိတဲ့အချိန် လူအများစုဟာ တစ်ယောက်တည်းစကားပြောတတ်ကြပါတယ်။တစ်ချို့ကတော့ တိုးတိုးလေး၊တစ်ချို့ကတော့ ကျယ်ကျယ်ပြောတတ်ကြတယ်။Trend ပရိသတ်ထဲမှာ ဘယ်သူမှမရှိတဲ့အချိန် တစ်ယောက်တည်းစကားပြောဖူးတဲ့လူပါလား?
ကိုယ့်အနားမှာလူတွေရှိနေရင်တော့ အောက်ကျသွားတဲ့မုန့်၊အစားအစာတွေကို ဒီတိုင်းပဲနှမြောစွာနဲ့လွှင့်ပစ်လိုက်ရမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့အောက်ကျသွားလည်း မြန်မြန်ပြန်ပြီးကောက်စားတတ်ကြတာပါပဲ။
သူများတွေနဲ့အတူရှိနေချိန်ဘယ်လောက်ပဲလှလှပပဆဲလ်ဖီဆွဲဆွဲ ၊ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းရှိနေချိန်ဆို ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ပိုစ့်တွေလုပ်ပြီးဆဲလ်ဖီဆွဲတတ်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း ၀မ်းနည်းစရာအခန်းပါလို့ငိုပေမဲ့ မျက်ရည်ကျပေမဲ့ ဘယ်သူမှမမြင်အောင် မြန်မြန်သုတ်တတ်ကြပါတယ်။ကိုယ်မငိုပါဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့အိမ်မှာတစ်ယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်ဆို မျက်ရည်လည်းမသုတ်ပဲ ငိုတောင်ငိုချတတ်တဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ ဘယ်သူမှမရှိတဲ့အချိန်၊ဘယ်သူမှကိုယ့်ကိုကြည့်မနေတဲ့အချိန် လုပ်တတ်ကြတဲ့အကျင့်လေးတွေပါပဲ။Trend ပရိသတ်ကြီးရော ဘယ်နံပါတ်တွေလုပ်ဖူးကြလဲ ?